Safarkaygii Islaamka: Talooyin ku saabsan sida diinta lagu gaarsiin karo dadka aan la noolnahay | Somaliska
Sabti kasta waxaan qaadan jirnay mowduucyadii aan ugu magacdarnay Safarkaygii Islaamka ee aan ku soo qaadan jirnay qisada Muslimiinta cusub iyo wadadii ay diinta u soo mareen.
Maanta waxaan go’aansaday in aan waxyar ka taabto talooyin ku saabsan sidii dadka aan la noolnahay diinta lagu gaarsiin lahaa. Anigu diinta cilmi badan uma lihi balse talooyinkaan waa kuwo si xaqiiqo ah aniga ii anfacay oo aan jeclahay in aan idinla wadaago.
1. Haka xishoon Muslimnimadaada: Qodobkaan waa mid muhiim ah maadaama aan aragnay wadankaan dad Muslimnimadooda ka xishoonaya. Oo marar badan qarinaya in ay Muslim yihiin. Haddii aadan ku faaneyn in aad Muslim tahay oo aadan dadka ogeysiin Muslimnimadaada cid ogaanaysa ma jirto. Adiga oo aan arinta ka dhigin Show ayaad si wanaagsan u muujin kartaa in aad Muslim tahay.
2. Ku dhaqan diinta: Marar badan waxaa dadka cusub diinta ku soo jiida ka dib markii ay arkaan Muslimiinta oo ku jira cibaado. Hadaba waxaa muhiim ah in aad diinta ku dhaqanto meelkasta oo aad joogto, salaada in aad tukado meel kasta oo aad joogto. Haddii dhaqan Muslim oo wanaagsan lagaa helo intaas ayaa ugu wanaagsan tusaalaha aad u muujin karto dadka kale. Haddii ay dhacdo in su’aalo lagu waydiiyo fadlan ka jawaab intii awoodaada ah. Wixii aadan aqoon waxaad kala tashataa cidii aqoon dheeri ah u leh diinta.
3. La xiriir cidii diinta danaynaysa: Haddii ay dhacdo in qof uu diinta wax kaa waydiiyo oo u muuqdo in uu diinta xiisaynayo. Waa in aadan xiriirka u jarin balse aad telefoonka iyo emailka ka qaadataa. Waa in aad xiriirka la wadaa oo aad u bandhigtaa macluumaad dheeri ah. Waxaa kale oo wanaagsan in aad u hadiyayso Quraanka haddii uusan qofku horay u aqrin. Marar badan isaga oo keliya ayaa ku filan in uu fure u noqdo qofka.
4. Noqo tusaale wanaagsan: Qodobkaan waa midka ugu muhiimsan. Diinta waxaa dadka ku soo jiidan kara dhaqanka Muslimiinta. Qofkasta haddii laga helo in uu noqdo tusaale wanaagsan mar hore ayuu Islaamku ku faafi lahaa Sweden. Ha iloobin in aad tahay ambassador diinta matalaya.
5. Tartiib Tartiib: Hanuunka Allah ayaa haya sidaa darteed haku tashan in qofku uu horay diinta ka qaadanayo markii aad labo eray u sheegto. Waxaa muhiim ah in aad si tartiib tartiib ah wax ugu sheegto. Waxaa muhiim ah in aadan qofka cabsi galin. Marka hore uga sheekee mowduucyada qafiifka ah ee uu qofku fahmi karo.
6. Xushmad iyo dhageysi: Mararka qaar waxaa dhici karta in aad is qabataan dad kale oo iyaguna faafinaya diintooda. Waxaa muhiim ah in aad dhagaysato oo aad xushmad u muujiso. Horay ha kala soo boodin DIINTAYDA AYAA SAX AH, TAADUNA WAA BAADIL. Arintu tartan ma ahan waxaa la doonayaa in aad xushmad u muujiso qofku waxa uu aaminsanyahay iyo in aad u muujiso waxyaabaha Islaamku ku wanaagsanyahay.
Sweden oo 150 qaxooti Soomaaliyeed ka soo qaaday Kenya
Abu-Xudayfah As-Soomali says:
Waan kaaga mahadnaqaynaa TALLOOYINKAAN tabban (Toosan ) waa sidaa sheegtay waaye –
Walaalaheey waxaan kula dardaarmaa Salaadu waa Saadkiina – weligaana ha dayicin Salaada , meel walboo joogto , xilli walboo joogto , iyo qofkaa tahayba Salaadu waa Sahaydaada Aduun iyo Aakhiro waa Furihii Janno .
Qofkii Salaada Sahalsada , ha ogaado Nolosho inaysan u macaananayn Aduunka Akhirana Cadaab jirto.
Maasha-allah,Jimcale Sxb alle hakaa abaal mariyo aad iyo aad baadna ugu mahadsantahay talooyinkaas oo aan is leeyahay waa kuwa ugu wanaagsan baahida ugu badana maantay umada muslimiint ahi u qabto. Intaas ka dib waxaan Jeclahay in aan akhristeyaasha Somaliska.com xasuusiyo sida dhaqan wanaagu u yahay shaashadii soo gudbinaysay wax aad rumaysantahay wanaaga ayleeyihiin. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa sida islaamku ku gaaray wadanka Indonesia oo ah wadanka shacabka ugu tirada badan oo muslimiin ahi ku noolyihiin. Sida ko qoran kutubta taariikhda wadankaas diinta islaamku kuma tagin Jihaad seef ama qori loo adeegsaday,Ducaad iyo qaari’iin wacdi iyo quraan baris isugu darayna kuma tagin. Waxaa la wariyaa in ganacsato muslimiin ah oo dhaqan wanaagsan ay ay ganacsi u tageen si dhab ahna dhaqankii iyo runtii dadka muslimiinta ah laga rabay ay kula dhaqmeen dadkii ay u tageen,sidaana dadkii deegaanku diintii iyo habdhaqankii ganacsatadii muslimiinta ahay ay ku jeclaadeen kuna qaateen. Akhristaha sharafta lehow ma qiyaasi kartaa inta been sheega iyo qalafsanida aan samayno waliba anaga oo astaan muslimnimo huwan ay dad diinta ku nacaan iskaba daah run iyo wanaag aan ku soo xero galinlee.
Sax walaalkeen , Wadankaa Indonesia waxaa tegay Asxaab Ganacsato ah oo aad u yaraa , Seddex Asxaabi ayaa tegay , waxayse ku dhaqmeen Islaamka Kulligiis. waxay dhihi jireen (Sideena Noqda ) u Fiirso 3 Asxaabi ayaa soo Islaamiday 202.9 million oo Muslimiin ah ama ka badan .
Maanta Rinkby Resengår , Tenista , Tjän Ängar waxaa deganaan Kumanaan Kun oo Muslimiin ah , waxaana kusoo Islaamay waxaan 20 Shakhsi dhammeen , iyaguna 3 ayay ahaayeen 250 Milyan oo dad ayay soo Islaamiyeen !!!
Anaga Sideena Noqda maan dhihi karnaa maanta , iska daa inaan DHAHNEE , ayagaa na leh Sideena Noqda , sideena u Noolaada iwm. Alloow Adaan Khayr kaa barinay Ummadeena TOOSI
March 31, 2012 at 12:43
Fariintaan waa la tiray waayo….
DADKA ALLAH KU CAASIYAY OO AY U GEYSAY AQOON LA’AAN WAAN U DULQAADANAYNAA BALSE U DULQAADAN MAYNO CAADO QAATA YAASHA SOOMAALIDA AH EE XAQA KU BADASHAY WAXYAR OO ADUUNYO AH – JIMCALE
Asc Salaan kadib waöaal jimcaale aad ayaad u mahada san tahay fikirkaaga saliimka ah oo qiimaha badan ka dib qofkuna ama muslimka qalbadiisu waa daxlaysata oo waxaa loo baahan yahay in mar walbo la xasuusiyo xusida alle.
intaa hadaan kaaga baxo adiga aan ujawaabo ninkaa magaca gaalka wata
waxaan islaamku waxaa waajib ku ah inuu marka hore si dabacsan uu diinta u gaarsiiyo gaalada illaah baa na amray oo nabi muuse ku yiri ninka ilaahnimada sheegtay oo fircoon ah hadal dabacsan inuu hanuuno ayaa la arkaa quraanku maraka hore bare asluubta dadka loo la dhaqmo Rcsw wuxuu yiri daka u bishaareya ee hancsiinina diinta islaamka sxb diintu waa nasiixo ee wux u yahay dhamaan daka
Jimcaale waan kaaga mahadnaqaynaa ina aTirto Qoraalka , midkaan Xaqqa Diiday , Hawadiisana raacay , walaal , waxaan kaa Codsanaynaa inaa gabi ahaantiisba ka Mamnuucdo , inuu aragti ka dhiibto Boggeena Somaliska , maxaa yeelay , WASAQ maahan wax Kale laga heli maa.
asc walal jimcale waa kumahadsantahay mowdhuca wanagsan e ad inosogudbisay alle ajar hakasiyo waxan kaacodsanayaa mr jimcale inadan u ogolaanin webka dadka diinta kuxadgudbayo markasta hadiiba la awodikaro in qadka lagasaro ninkan dintisa kubadashay ceyrta in lobadsho fadlan kabasaar ciwankisa webka mahadsanid
alaw khayr ka dhig
xarf egroeg says:
Jimcaale waxaan rabey in aan ku tuso in qodob-ka 6 aad oosan ka suura gal aheeynn qof muslim ah, waad na ii rumeeysay, markii ad tirtey fikiirkii yaraa on cidna lagu ceeynin, een so qoray,
– waxaa kur ku tiri saan”6. Xushmad iyo dhageysi:”
Qofki maanta wakaaga yeela ee islam-ka soo galisaan, kolley bari haddow ka box : waa DIL!? BAL U FIIRSO, waa u timid si debec san aad wax ugu shegtay!^ kadib waa kugu diidey : waa IN LA DILAA!? MARKA HORE WAA IN LA OGEEYSIIYAA IN HADII OOW BARI KA MAALIN DIIINTA KA BOXO MADAXA LAGA JIRI DOONO!